मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर | किनमेल कार्ट - RapidAuctionSoft
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 दिन नि: शुल्क परीक्षण
प्लगिन्स / अपग्रेड
ठोस टाइमर रक World Class Support
Video: मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर - RapidAuctionSoft
मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर
स्वागत छ RapidAuctionSoft गर्न – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर and the Best PHP Penny Auction Script उपलब्ध
बारेमा सोध्न हाम्रो 10% मूल्य मिलान गारंटी 1-603-557-1563
अब हामी ड्रप SHIPPER एकीकरण प्रस्ताव गर्न सक्षम छन्, तपाईं एक पूरा टर्नकी सञ्चालन प्रस्ताव!!!
पहिले नै एक मुद्रा लिलामी वेबसाइट?
तपाईँको सफ्टवेयर विक्रेता तपाईं असमर्थित छोड्न गर्नुभयो?
यो पुरानो प्रविधि आधारित छ?
यो त्रुटिहरू छैन?
यो दुर्घटना गर्दैन?
इमेल स्पाममा अन्त गर्छन्?
काम तपाईंको एसईओ छ? यो मोबाइल छैन अनुकूल छ?
हामी हाम्रो धेरै उच्च सिस्टम मा आफ्नो डिजाइन र सामग्री एकीकृत गर्न सक्छन्
नयाँ अपडेट – राम्रो कुना तस्बिरहरू समावेश (छनौट3शैलीहरू र 8 रंग, सबै गतिशील पाठ अब भाषा समर्थित साथै), आरएसएस, आरएसएस + एटम फीड, नीलामी र सीएमएस सामग्री र धेरै अन्य परिवर्तनहरू लागि साईटम्यापहरू!!!
हामी तपाईंलाई आफ्नो मुद्रा लिलामी वेबसाइट विचार छलफल गर्न तत्पर. हरेक ग्राहक आफ्नै विचार छ र हामी लिख अनुकूलन लिलामी कोड आनन्द, केही हाम्रो लागि जटिल छ. हामी हाम्रो ग्राहकहरु विचार सबै बारे उत्साहित प्राप्त, वास्तवमा यो हाम्रो काम को सबै भन्दा राम्रो भाग हो…हामी आफ्नो उत्तेजना मा साझेदारी गर्न प्रेम
कुनै पनि समयमा हामीलाई कल, हामी विदेशी कम्पनीहरु संग सबै समय काम
त्यसैले तपाईं एक ई-वाणिज्य वा मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर व्यवसायको बारेमा गम्भीर छन्?
तपाईं आफ्नो अनुसन्धान अन्य ई-वाणिज्य मञ्चहरूमा बारेमा खराब कथाहरू गरेको र सुनेका, र एक सम्मानित स्रोतबाट खरीद बारे चिन्तित हुनुहुन्छ. राम्रो हामीले तपाईंको फिर्ता. निःशुल्क अपग्रेड व्यापार मा सबै भन्दा राम्रो छ कि एक गारंटी र सबैभन्दा लामो परीक्षण अवधि हामी कहिल्यै देखेको संग. यसलाई प्रयास 14 दिन हाम्रो सर्भर को एक मा निःशुल्क जोखिम…र तपाईं तयार गर्दा आफ्नो आफ्नै सर्भर तैनाती, वा हाम्रो होस्ट समाधान POF एक चयन
सीमित समयको लागि हामी लागि स्थान3बिटा परीक्षण वेबसाइट….यी3फैलिनु र परीक्षण responsibly जीवनको लागि निःशुल्क त्यहाँ सफ्टवेयर प्राप्त हुनेछ वेबसाइट…अनुकूलन डिजाइन वा कार्यक्रम बाहेक. गर्न बिटा परीक्षण सम्बन्धमा इमेल पठाउन हाम्रो विकास टोली
मुद्रा लिलामी लिपि
तपाईं एक मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर समाधान गर्नुपर्छ, मुद्रा लिलामी स्क्रिप्ट समाधान वा ई-वाणिज्य समाधान
सर्वश्रेष्ठ मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर, मुद्रा लिलामी स्क्रिप्ट समाधान उपलब्ध
मा 2018 मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर र ई-वाणिज्य सफ्टवेयर को धेरै विक्रेता यदि कुनै आधुनिक रूपरेखा पुरानो प्रविधी र साना प्रयोग थिए भनेर हामी याद. त्यसैले हामी लेखन सुरु, हामी हाम्रो PHP को लागि CodeIgniter प्रयोग गरेर जमीन देखि हाम्रो कोड लेखे. CodeIgniter आधुनिक, MVC फ्रेमवर्क छ (मोडेल, दृश्य, नियन्त्रक), जो जहाँ यो आवश्यक गर्नुपर्छ गर्न तर्क अलग, यो सिक्न र विकास गर्न सुपर सजिलो छ, विशिष्ट PHP भन्दा छिटो छ, थप विश्वसनीय र थप भविष्य प्रमाण.
तर पर्याप्त थियो, हामी पनि आजाक्स टाइमर भर पर्न किनभने किन भन्दा PHP मात्र मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर सर्भर असफल कारण छ भनेर बुझे, बोली र सन्देश. त्यसैले Socket.io र Node.JS यो सबै सारियो. सर्भर सन्देशहरू सीधा ग्राहकको लागि कुनै आवश्यकता संग ग्राहक पठाउन सक्छन् कि अर्थ नयाँ डाटा लगातार अनुरोध. हाम्रो टाइमर वास्तवमा 1000th दोस्रो को गरेको मा बोली ट्र्याक. हाम्रो बोली छिटो छ कि अर्थ, थप स्थिर र अन्य समाधान भन्दा थप विश्वसनीय. कसैलाई हराएको अन्तिम दोस्रो बोली बारेमा उजुरी चिन्ता छैन. हाम्रो बोली अन्य साइटहरु भन्दा अधिक सही ट्र्याक छ. यदि धेरै प्रयोगकर्ता एकै समयमा बोलपत्र तपाईं शाब्दिक नै दोस्रो भित्र उच्च bidder परिवर्तन हेर्न सक्नुहुन्छ.
विश्व वर्ग मुद्रा लिलामी डिजाइन
अन्तमा हामी सबै भन्दा संभावित ग्राहकहरु होस्टिंग र सजिलो मासिक भुक्तानी मा मर्मतका लागि थप तिर्ने आराम गर्दै छन् बुझे, भरपर्दो लोड सन्तुलित सर्भर मा, संसारमा सबै भन्दा राम्रो सर्भर कम्पनीहरु को एक द्वारा प्रदान! त्यसैले हामी तपाईं को लागि सबै सम्हाल्न. तपाईं एक साधारण सर्भर outgrow भने, त्यसपछि हामी र हुन आवश्यक छ भने आफ्नो आफ्नै सर्भर गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ सक्नुहुन्छ. तर तपाईं अझै पनि हाम्रो संस्करण नियन्त्रण सफ्टवेयर को लाभ को सबै हुनेछ.
एक सबै समय सीमित लागि सबै नयाँ ग्राहकहरु मुक्त स्थापना प्राप्त,5प्रशिक्षण को घन्टा र5निःशुल्क डिजाइन घन्टा.
हामी सिर्फ मुद्रा लिलामी समाधान भन्दा थप प्रस्ताव
हाम्रो किनमेल गाडी प्लगइन बारेमा सोध्न.
नयाँ भाषाहरू को साथै समर्थन
ठोस टाइमर रक, दोस्रो को thousandths मा ट्र्याक. यो सबैभन्दा सही बोली सिस्टम उपलब्ध.
किन्नुहोस हुनुभन्दा चलाएर. मुक्त2हप्ता परीक्षण.
वर्तमान क्लोन समावेश
हामी पनि छ 25 हाम्रा सबै उत्पादनहरू लागू गर्न सकिन्छ कि मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर विषयवस्तुहरू, आफ्नो मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर लागि डिजाइन मा ठूलो लचीलापन अर्थ
अन्य लिलामी प्रकारका बारेमा हामीलाई सोध्न, हामी सिर्फ मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर भन्दा धेरै अधिक गर्न
हाम्रो प्रत्यक्ष परिक्षण जाँच हाम्रो प्रदर्शन साइट मा!!!
मुद्रा लिलामी सफ्टवेयर विशेषताहरु
दर्ता सामान्यतया एक बोली राख्दै अघि, प्रयोगकर्ता दर्ता गर्न आवश्यक छ.
लग इन प्रयोगकर्ता एक सदस्य हुनुको धेरै फाइदा लाभ गर्न सक्छन् – आफ्नो खाता पृष्ठ मा लग, एक बोली ठाँउ, आफ्नो खातामा रकम र धेरै कार्यहरु थप्न.
खरिद क्रेडिट / Add शेष प्रयोगकर्ता क्रेडिट खरिद गर्न सक्छन् र त भुक्तानी गेटवे मार्फत आफ्नो खातामा रकम थप्न, बैंक, वा बोलपत्र राख्दै अघि प्रत्यक्ष जम्मा.
ठाउँ बोलपत्र प्रयोगकर्ता एक उत्पादन छनौट र बोली गर्न सक्नुहुन्छ. उनि जीत सम्म तिनीहरूले इच्छा रूपमा प्रयोगकर्ता धेरै बोलपत्रहरू गर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूले पनि एक बोली या त राख्न वा आफ्नो बोली सुरक्षित र Bidbutler प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्वतः आफ्नो तर्फबाट बोलपत्र गर्न.
Bidbutler Bidbutler, पनि autobid वा मास्टर बोली भनिन्छ, जहाँ सिस्टम स्वतः तपाईंको सुरक्षित बोलपत्रहरू हरेक दस सेकेन्ड स्थानहरूलाई छ, वा तपाईँले निर्दिष्ट अन्तराल whichever.
एसएमएस बोलपत्र तपाईं दर्ता र एसएमएस बोली लागि लग इन गर्नुहोस् गर्न आवश्यक छैन. एसएमएस बोली जानकारी सम्बन्धित लिलामी मा देख्न सकिन्छ र साइट प्रशासक द्वारा सेट गर्न सकिन्छ.
प्रत्यक्ष बोली इतिहास प्रयोगकर्ता उत्पादन विवरण पृष्ठ भित्र बोलपत्र इतिहास खण्ड देखि आफ्नै र अन्य बोली गतिविधिहरु हेर्न सक्छन्.
को लिलामी को विजेता विजेताले जब समय शून्य सेकेन्ड पुग्छ एक बोली राख्न अन्तिम व्यक्ति छ. विजेता को लिलामी वस्तुको लागि अन्तिम मूल्य दिन्छिन् (जो वास्तविक मूल्य भन्दा कम हुनेछ).
लिलामी को प्रकार त्यहाँ बजार मा लिलामी को धेरै प्रकार छन्; तथापि, सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार नियमित लिलामी छन्, निश्चित मूल्य लिलामी, Nilbitter लिलामी, निःशुल्क लिलामी र रुकी लिलामी.
सीएमएस सामाग्री व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएस), छ जहाँ तपाईं आफ्नो लिलामी साइट लागि विभिन्न खोज-इन्जिन अनुकूल पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ – हाम्रो बारे जस्तै, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस, गोपनीयता नीति, सर्तहरू & अवस्था, सोधिने प्रश्न गरेको, मदत, कसरी यो काम गर्दछ र यसको अगाडी.
11 प्रयोगकर्ता खाता
वर्तमान बिडिंग लिलामी सूची – यहाँ तपाईं आफ्नो वर्तमान / प्रत्यक्ष लिलामी गरेको बोली जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ.
वन लिलामी सूची – यहाँ तपाईंले जित्यो नीलामी को आफ्नो सूची हेर्न र अन्तिम मूल्य तिर्न सक्नुहुन्छ.
बोली इतिहास अभिलेख – प्रयोगकर्ता यहाँ बाट आफ्नो बोली संग्रह हेर्न सक्नुहुन्छ.
थप मिली (बोली प्याक खरिद) – प्रयोगकर्ता यो खण्ड देखि एक बोली ठाँउ गर्न ब्यालेन्स थप्न सक्नुहुन्छ.
भुक्तानी विधि – प्रयोगकर्ता कुनै पनि भुक्तानी विधि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, सबै धेरै विश्वसनीय, र लिलामी अन्तिम मूल्य तिर्न. PayPal ले पूर्वनिर्धारित भुक्तानी गेटवे छ.
कारोबार इतिहास – प्रयोगकर्ता यो खण्ड सबै आफ्नो कारोबार गतिविधिहरु हेर्न सक्छन्.
कोड उद्धार – प्रयोगकर्ता साइट पदोन्नति को फारम रूपमा व्यवस्थापक द्वारा प्रदान गरिन्छ कि विशेष प्रस्ताव कोड उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ.
एक मित्र उल्लेख – तिनीहरूले इच्छा रूपमा प्रयोगकर्ता धेरै साथीहरू उल्लेख गर्न सक्छन्. हरेक सान्दर्भिक लागि पनि प्रशासन द्वारा सेट बोनस क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
पासवर्ड परिवर्तन – प्रयोगकर्ता यहाँ बाट आफ्नो खाता पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
बन्द खाता – प्रयोगकर्ता आफ्नो खाता बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरू फेरि उही इमेल ठेगाना आफ्नो खाता खोल्न सक्दैन.
समाचार पत्र सेटिङ – प्रयोगकर्ता या त सक्षम वा यो खण्ड देखि समाचारपत्र सदस्यता विकल्प अक्षम गर्न सक्छन्.
समाचारपत्र पर्यटकहरू सदस्यता सूचनाहरू प्राप्त गर्न लिलामी समाचारपत्रको लागि साइन अप गर्न सक्छन्, अद्यावधिक र प्रस्ताव.
श्रेणी व्यवस्थापन प्रशासन व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ (थप, सम्पादन वा मेटाउन) विभाग लागि या त नाम वा ID द्वारा विभाग र खोज.
नीलामी व्यवस्थापन व्यवस्थापक थप्न सक्नुहुन्छ, सम्पादन वा नीलामी मेटाउन र नाम खोजी, स्थिति, प्रकार र आईडी. प्रशासन पनि उही लिलामी प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ साथै यसलाई गरेको बोली इतिहास र अन्य विवरण मा हेर्न.
नीलामी रिपोर्ट / वितरण व्यवस्थापक को विजेता लिलामी को रिपोर्ट वा विजेता विवरण हेर्न सक्छन्. प्रशासन यो खण्ड देखि वितरण गर्न लिलामी गरेको बाँकी स्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रशासन स्थापना वेबसाइट यो खण्ड देखि साइट सेटिङहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ.
सदस्य व्यवस्थापन प्रशासन त थप्न सक्नुहुन्छ, सम्पादन वा प्रयोगकर्ता मेट्न वा आफ्नो स्थिति खोजी, नाम र परिचय. प्रशासन पनि प्रयोगकर्ताहरूको बोली देख्न सक्नुहुन्छ & कारोबार इतिहास.
सीएमएस प्रशासन थप्न सक्नुहुन्छ, सम्पादन वा त्यस्तो सहायता रूपमा साइट सामग्री कुनै पनि मेटाउन, सोधिने प्रश्न, गोपनीयता नीति र यति मा.
प्रशासन स्थापना इमेल यो खण्ड इमेल सेटिङ चयन गर्न सक्नुहुन्छ – इमेल सक्रिय, भूल आदि.
विजेता व्यवस्थापन प्रशासन आफ्नो छवि संग विजेता सूची सेट गर्न सक्नुहुन्छ, ठेगाना, र आफ्नो प्रतिक्रियाहरू.
प्रशासन साइट तथ्याङ्कले वेबसाइटको रिपोर्ट हेर्न र CSV ढाँचामा रिपोर्ट निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ.
समय क्षेत्र प्रशासन स्थापना यो खण्ड आफ्नो देशको समय क्षेत्र सेटिङ सेट गर्न सक्नुहुन्छ.
विशेष प्रस्ताव / संवर्धन व्यवस्थापन
समय प्रशासन आफ्नो वेबसाइट बढाउन विशेष प्रस्ताव र बोनस सेट गर्न सक्नुहुन्छ. बोनस कोड एक सेट समय सीमा हुनेछ.
प्रशासन साइनअप र सान्दर्भिक बोनस सेट गर्न सक्नुहुन्छ सेट बोनस.
बोली प्याक व्यवस्थापन प्रशासन मुक्त क्रेडिट साथ विभिन्न बोली पैक सेट गर्न सक्नुहुन्छ. प्रशासन थप्न सक्नुहुन्छ, सम्पादन वा प्रत्येक बोली प्याक मेटाउन.
सहायता / सोधिने प्रश्न व्यवस्थापन विवरण साथ सहायता र अकसर पृष्ठ बनाउनुहोस्.
आईपी ​​ब्लक प्रशासन वेबसाइट थप पहुँचका लागि कुनै पनि आईपी ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ.
पासवर्ड परिवर्तन प्रशासन यहाँबाट आफ्नो खाता पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
स्वतः relist र स्वतः सूची नीलामी
लग इन फेसबुक वा ट्विटर संग
धेरै AddOns / प्लगइन र optiona सुविधाहरू
आधुनिक रूपरेखा लेखिएको अर्थ यो स्थिर र अपेक्षित छ
तिम्रो फोन (आवश्यक)
नयाँ dropship addon DOBA र MegaGoods लागि समर्थन छ, थप dropshippers अर्को केहि दिनहरुमा थप हुने. उठ र केही सरल क्लिक मा एक स्टोर संग चलिरहेको
गर्न विषयवस्तुसँगप्रस्तुतिकरण परिचय हाम्रो 20+ टेम्प्लेट, उप टेम्पलेट Combos…संग लगभग 30 विषयवस्तुहरू र बढ्दै…तपाईं अब माथि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ 500+ पूर्ण अद्वितीय डिजाइन. बिदा मा धेरै आधारित
गतिशील भाषा समर्थन, आफ्नो साइट अधिक मान्छे पुग्न गरौं
मुद्रा नीलामी लागि नयाँ Addon, किनमेल र POS कोड…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (स्थान, किनमेल वा नीलामी…वर्ष को अन्त द्वारा BTW आउँदै eBay नीलामी). यो addon अहिले उत्पादन र मेटा ट्याग लागि काम गर्दछ, तर आफ्नो अनुवाद एपीआई लागि Google खाता चाहिन्छ. […]